Amin'ny ankapobeny, ny fittings vy ductile dia endrika mitovy amin'ny an'ny vy vy fotsy ary ny tendrony dia mihidy na mety kokoa. Ny tanjaky ny vy mahery amin'ny vy dia ahafahana manatsara ny famolavolana fittings ary mampihena ny refy. Manamora ny fametrahana ...
Fampifanarahana sy torolàlana momba ny fantsom-by ny vy
Couplings Lightweight couplings dia namboarina manokana hiantohana fifandraisana matanjaka sy haingana ary mora eo amin'ny fantsona sy fittings. Vita amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny gasket rubber, ny tsikombakomba dia mifanitsy amin'ny toetran'ny fantsom-panafody sy ny fittings. Torolàlana momba ny fivoriambe 1. Ampidiro ny r ...
Fampidirana Epoxy cast iron iron pipes dia namboarina tamin'ny fitaovana azo averina 100%, tsy vitan'ny hoe sariaka amin'ny tontolo iainana, fa manome fahafaham-po ireo fananana ilaina ilaina koa hanoherana ny fepetra mahery setra na anatiny sy ivelany an'ny fantsona sy fittings; ireo fananana ireo dia ahitana ny excel ...
Fehin-kibo, fanamafisana ny fanerena avo lenta, fanamafisana ny fingotra
Grip Collars Ny rafitry ny fantson-drano orana na ny rafitra fantsom-panafody dia mety iharan'ny tsindry noho ny fanerena noho ny fihoaram-pefy na ny voky ny fotaka lehibe. Amin'ny fizarana manokana - ny fanovana ny lalana sy ny gradient, ny sampana ary ny plugs-ny fihenan'ny tondra-drano ary ny fitombon'ny paipaika dia miantso ny tonon-taolana ...
Ny Coupling No-Hub dia nampiasaina mba hanome tombo-kase tsara sy lehibe eo anelanelan'ny fantsom-by vy tsy misy fantsom-pifandraisana. Ny taolan-tehezana misy patanty ao anaty gasket Quick Hub dia miantoka ny fijanonan'ny gasket ao anaty ampinga mandritra ny fandefasana sy ny fikirakirana ary koa ny fanerena haingana ny fametrahana eo amin'ny fantsona. Eo ...
Clamp amin'ny lohataona lohataona & fametahana clamp
Clamp amin'ny tarika lohataona Ireo clamp ireo dia misy tarika midadasika kokoa noho ny fametahana fihenjanana tsy miovaova izay manome fandrakofana bebe kokoa ary mampihena ny fahafahan'ny fivoahana. Ny fantsom-panaovan-tsolika dia mamela ny clamp hivelatra ho azy sy hifanaraka amin'ny fantsonao na fantsonao rehefa miovaova ny mari-pana. Ny clamp dia natao ho an'ny plastika mafy ...
Clamp V-band & Clamp sofina tokana
V-band clamp V-band clamp, vy tsy misy fangarony firafitry ny maodely samy hafa sy ny fizotran'ny famokarana hihaona amin'ny filàn'ny fantsom-pifandraisana hafa. Miaraka amin'ny vgroove clamp tonta sy endrika acompletes napetraky ny fifangaroan'ny fantsona V ny fantsom-by dia teknika vaovao, revolisiona ...
Ny clamp tigra dia be mpampiasa amin'ny vy vy, tariby sy tariby, fiara mandeha amin'ny angovo vaovao, fantsona, sambo, akora simika ary indostria hafa. Ny fametahana tigra dia mandray lovia vy miolakolaka, ary ny bara vy dia mihamafy amin'ny fomba fanamafisana nut Ny fitaovana dia vita amin'ny vy karbona avo lenta, ary ny roa-c ...
Hehy tokana tokana, kofehy indroa ary fatorana kambana roa sosona
Fehikibo tokana tokana fametahana lehibe sy mafy izay miteraka fihazonana azo antoka sy azo antoka manodidina ny fantsona mahery. Ny mando mahazaka asidra Robust dia ampiasaina izay ilana hery fanamafisana lehibe - ohatra ny fantsona lehibe sy nohamafisina ao anatin'ny fambolena, fanondrahana, rafi-pitetezana, fitrohana ny fotaka sns ...
T-bolt clamp & T-bolt miaraka amina lohataona clamp
T- bolt clamp T clamp, vy tsy misy fangarony amin'ny fampiasana firafitra maodely samihafa sy ny fizotran'ny famokarana mba hihaona amin'ny filan'ny fantsom-pifandraisana fantsom-pifandraisana samihafa. Ny sakan'ny vy dia 19mm, ny hateviny dia 0.6-1.0mm. Tanjaka mahery vaika sy mahery vaika, torsion avy amin'ny 9Nm. Ny vokatra dia hatsarana ...
Clamp tsy misy farany, clamp fantsom-panafahana haingana sy clamp Euro Style mavesatra
Fametahana vy tsy misy poria tsy misy fangarony ary famolavolana vy voaravaka, fametrahana mora, ny fantsom-by dia mety ho fanitarana fatratra ho an'ny fantsona caliber lehibe. Ity sakan'ny fantsom-pifandraisana hose ity dia 8mm, 9mm, 12mm, 12.7mm ary 14.2mm. Ankehitriny dia be mpampiasa amin'ny fianakaviana, fiara, fambolena, manamboatra ventilatio ...
Clamp fantsom-bolo alemana sy clamp fantsona amerikana
Ny fantsom-baravarana fantsom-bolo Alemanina dia manome hery mifehy kokoa noho ny fametahana amerikana amin'ny torque kely kokoa. Midika izany fa fitaovana mavesatra, fiara fialam-boly ary fitaovana amin'ny bozaka sy zaridaina no matetika afaka mampiasa ny iray amin'ireny sakan-damban'ny bandy 9 mm io fa tsy amerikana amerikana 1/2 ″ ...